फिल्म – Page2– ZoomNP
चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण हलमा हाउसफुल, भएपछि दिपाले गरिन् दीपकलाई किस
काठमाडौं । बिहानी शोमै हाउस फुल भएपछि निर्देशक दिपा श्री निरौलाले स्क्रिप्ट राइटर दिपक गिरीलाई किस गरेकी छन् ।
शुक्रबार देखि देशभरिका ८० भन्दा बढी हलहरुमा प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ले बिहानैको शोमा दर्शकको उल्लेख्य साथ पाएको बताइएको छ ।
चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण हलमा शुक्रबार बिहानैको शोमा हाउसफुल भएपछि भुईमा बसेर हेरेकी दिपा र नायिका प्रियंका कार्कीले सोचे भन्दा बढी दर्शकको उपस्थित भएकाले आफुलाई खुसी लागेको बताइन् ।
दिपकले पनि बिहानको...
कर्णालीका बालबालिकाको कथा बोकेको “कालोपोथी” ओस्कार आवार्ड-२०१७ का लागि मनोनित
काठमाडौं । ‘कालोपोथी’ले ओस्कार अवार्ड २०१७ का लागि नेपाली चलचित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको छ । एकेडेमी अफ मोशन पिक्चर आटर्स एण्ड साइन्सेसद्वारा सन् २०१७ मा घोषणा गरिने ८९औं एकेडेमी अवार्ड (ओस्कर अवार्ड)मा ‘कालोपोथी’ नेपलका तर्फबाट सहभागी हुनेछ ।
ओस्कारका लागि पठाउन पठाउन छनौटका लागि कालोपोथी, पशुपतिप्रसाद र को–आफ्नोवीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । विदेशी भाषी चलचित्र जाँचपास समितिले ‘कालोपोथी’लाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।
एकेडेमी अवार्डका लागि सबै मापदण्ड पुग्ने...
जया बच्चनले अमिताभ बच्चनलाई मसँग खेल्नबाट रोकिन्– रेखा
परिपक्व उमेरमा पनि उस्तै सुन्दरी बलिउडकी पुरानी नायिका रेखा यतिबेला जोगिनीजस्तै बनेकी छिन्। उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसैगरि बाहिर आइहाल्ला कि भनेर चनाखो रहन्छिन्। हत्तपत्त पत्रकारहरुसँग भेट्न मान्दिनन्, कसैलाई अन्तवार्ता दिनु त लगभग असंभव नै छ। तर, ठीक यतिबेला एउटा यस्तो पुस्तक बाहिर आएको छ जसले उनको जीवनका स–साना विवरणहरु मात्र होइन कठिनतम क्षणहरु र समस्याग्रस्त सम्वन्धका कथाहरु भनिरहेको छ।
‘रेखाः द अनटोल्ड स्टोरी’ नाम दिइएको यो पुस्तकले...
प्रेमकथामा आधारित भुवन केसीको सुपरहिट चलचित्र ड्रिम्स अब युट्युबमा !
काठमाडाैं-नायक भूवन केसीको डेब्यु निर्देशन रहेको चलचित्र ड्रिम्स चाडैं युट्युबमा सार्वजनिक हुने भएको छ । ड्रिम्स अब आउँदो शुक्रबार युट्युबमा सार्वजनिक हुने भएको छ |
अनमोलको तेस्रो चलचित्र रहेको ड्रिम्सले बक्सअफिसमा करोडौको व्यापार गरेको थियो ।
चलचित्रको व्यापक सफलता पछि अनमोलको क्रेजसँगै यसै चलचित्रबाट डेब्यु गरेकी नायिका सम्राज्ञी शाहको चर्चा पनि चुलिदै गएको छ । साम्राज्ञीले ड्रिम्सका लागि उत्कृष्ट नव नायिका अवार्ड पाइसकेकी छिन् | यस्तै अनमोलले पनि फ्यान अवार्डमा स्टार अफ दयर अवार्ड पाएका थिए । भुवन केसीले पनि यसै चलचित्रका लागि उत्कृष्ट...
सोनाक्षी-सेना प्रकरण: राजेश हमाललाई प्रहार गर्दै दिपकराज गिरीले गरे सेनाको बचावट
काठमाडौं, ३ जेठ । भारतीय कलाकार सोनाक्षी सिन्हालाई नेपाली सेनाले गरेको सम्मानबारे यतिबेला निकै टिक्काटिप्पणी भईरहेको छ । महानायक राजेश हमाल लगायत अधिकांश नेपालीले विरोध गरिरहेका बेला हास्यकलाकार दीपकराज गिरिले भने जोडदार समर्थन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले सोनाक्षीलाई नेपाली सेनाले सम्मान गरेर पाहुना प्रतिको व्यबहार देखाएको बताएका हुन् ।
‘सोनाक्षीलाई उ एउटा सेनाको जर्नेलले सम्मान गरेको घटनाले यत्रो बितन्डा मच्चाएको आश्चर्य हो,’ उनले समामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘यो घटनाले सेनाको मनोबल नै गिराउने काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, सेनाले...
बाबुरामले करिश्मा मानन्धरको तस्बिर किन यतिधेरै मनपराए ?
काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालले अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको तस्बिरलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेर सदस्यता खुला भएको सूचना जारी गरिरहेको छ । नयाँ शक्तिको फेसबुक पेजमा करिश्माको तस्बिरसँगै पार्टीमा सदस्यता खुला रहेको जनाइएको छ ।
स्पोन्सर गरेर राखिएको फेसबुक पेजलाई बाबुराम भट्टराईले पमोट गरिरहेका छन् । नयाँ शक्ति नेपालको केन्द्रीय अन्तरिम परिषदकी सदस्य करिश्माले कति सदस्य बढाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै । फेसबुकमा करिश्माको फोटो हेरेकै भरमा नयाँ शक्तिको सदस्यता लिनेहरूको भने...
अमेरिका पुगेका बलिउड अभिनेता शाहरुख खान प्रहरी नियन्त्रणमा
लस एन्जलस, साउन २८ । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई अमेरिकी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
अमेरिकी सहर लस एन्जलसस्थित विमानस्थलमा आफू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको शाहरुख खानले जनाएका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘म जहिले पनि अमेरिका आउँदा अध्यागमन विभागमा हिरासतमा लिइनु निकै दुःखलाग्दो भएको छ ।’
एक अर्को ट्वीटमा उनले प्रहरी नियन्त्रणमा आफूले ‘पोकेमोन गो’ गेम खेलिरहेको जनाएका छन् ।
केही घण्टाको अनुसन्धानपछि आफू प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भएको शाहरुखले जानकारी दिएका छन् ।